उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि लम्ब्याउने तयारी ! – List Khabar
Home / समाचार / उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि लम्ब्याउने तयारी !
उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि लम्ब्याउने तयारी !
admin June 25, 2021 समाचार Leaveacomment 116 Views
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा फेरि लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि असार १४ गते राति १२ बजेसम्म जारी रहने छ। पछिल्लो समय थपिएको निषेधाज्ञामा नीजि सवारीसाधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउन अनुमति दिइएको छ भने पसलहरु बार अनुसार खुलेका छन्।
यस्तै सरकारले असार १७ गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान पनि खुल्ने बताएको छ। तर, सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्ने भन्नेबारे कुनै टुंगो छैन। व्यवसायीहरुले मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणदर नघटेको र निषेधाज्ञा खोल्दा स्थिती भयावह हुने भएकाले करिब दुई महिनाअघिदेखिको निषेधाज्ञालाई अझै हप्ता/दश दिनका लागि थपिने प्रशासनले जनाएको छ ।
विदेशबाट ल्याएको सामान विमानस्थलमा चोरी हुनेगरेको खुलेको छ । कार्गोमा हालेको सामान चोरी हुने गरेको तथ्य प्रहरीले पक्राउ गरेपछि खुलेको छ । काठमाडौं कार्गोको आयात गोदामबाट ल्यापटप चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ बेशीगाउँ बस्ने
सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–२ घर भएका बिष्णु अधिकारीलाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यो तथ्य खुलेको हो । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यबस्था कम्पनी लिमिटेड, त्रिभुवन अन्त्रर्राष्ट्रिय विमानस्थल शाखा कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कार्गो कम्प्लेसको आयात गोदामबाट विभिन्न समयमा १३ थान
ल्यापटप चोरी भएको भनी निबेदन परे पश्चात महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरीले विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको समन्वयमा अधिकारीलाई चोरी गरिएको ८थान ल्यापटप र २ थान चार्जर सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । उनलाई चोरी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइने उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।तीन नेताको लञ्च मिटिङ किन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच महाधिवेशनसम्म मिलेर जाने सहमति भएको छ । कोइराला निवास महाराजगञ्जमा आज भएको छलफलमा तीन नेता महाधिवेशनसम्म मिलेर जाने सहमति भएको हो । छलफल महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
केही दिनअघि उनीहरुले विमलेन्द्र निधि निवासमा छलफल गरेका थिए । केही दिनभित्रै सिंहको निवासमा छलफल गर्ने बताइएको छ । “१४ औं महाधिवेशनमा सबैलाई समेटेर लैजान सकिन्छ भनेर हेर्नका लागि पनि हामी बसेका थियौं । विमलेन्द्रजीको बसेको बैठकपछि आएको समाचारले पार्टीलाई सही दिशाम लैजाने अग्रसरतालाई आत्मशाथ गर्छौं ।
संस्थापन नेताले पुर्याएको ठाउँमा पार्टी पुर्याउनुस् भन्ने छ । तीनै जना सँगै बसेर सल्लाह गरौं भन्ने भएको छ । कांग्रेसको, लोकतन्त्रको हितमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो,” छलफलबारे प्रकाशमानले भने ।
Previous जापानमा फेरि स्वास्थ्य सङ्क’टकाल घो’षणा हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको चेता-वनी ।
Next Breaking: नेपालमा आज कति संक्रमित थपिए कति निको भए ? मन्त्रालयले दियो यस्तो अपडेट